Wasiir Goodax: Marna lama cafinayo hogaamiyaasha Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Goodax: Marna lama cafinayo hogaamiyaasha Alshabaab
A warsame 22 March 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, C/laahi Goodax Barre ayaa shaaciyey in dowladdu aysan cafis u fidin doonin raga hogaamiya Alshabaab, isagoo ku eedeeyey iney godob ka galeen dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Wasiir Goodax ayaa sheegay in Doowlada aysan cafis u fidin doonin saraakiisha waaweyn ee shabaab, balse cafis loo fidin doono dhallinyarada yar yar ee sida uu yiri lagu khalday qaab qabiil ama dhaqaale.
Wasiirka oo la weydiiyey siyaasadda dawlada ee saraakiisha hogaanka u ah Al Shabaab ayaa sheegay inay saddex qeybood ay ugu kala qeybsan yihiin Al Shabaab iyo dagaalyahanahooda, wuxuuna sheegay in qeybta ugu muhimsan ay yihiin ragga sarsare ee hogaanka ah kuna xiran Al-Qaacida inaysan wax cafis ah lahayn.
“Nimankan cadowga ah dhowr nooc ayey iskugu jiraan; dhalinyaro ciidan ah oo iyaga la shaqeeya oo hub u qaad u ah fikir ka baxsana inay hubka u sidaan aan wadanin, koox masuuliyiin ah oo og khaladkaas ay sameynayaan oo og iyagoo dhalinyaradaas ka shaqeysiiyay, iyo masuuliyiin sare oo ajaaniib la heysta oo Al-Qaacida wata, iyagu kuwaas Al Qaacida ku xiran cafis ma leh.” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya.
“Ragga sida Godane oo kale ee Al Qaacida ku xiran waa rag godob ka galay qaranimada Soomaaliya, iyagu wax cafis ah ma leh haddii la qabto.” ayuu yiri wasiirka oo sharaxayey siyaasadda dawlada ee ku aadan Al Shabaab iyo hogaankooda.
“Dhalinyarada yar yar ee madaxa laga khalday ee loo sheegay in waxa ay u dagaalamayaan ay diin yihiin haddii ay soo laabtaan oo hubka dhigaan, kuwaas waa lala macaamilayaa.” ayuu sii raaciyey wasiir C/laahi Goodax.
Dowladda Soomaaliya oo garab ka heleysa in ka badan 6 dal oo Afrikaan ah ayaa wadda qorshe dagaal oo Alshabaab looga saarayo magaalooyinka gacantooda ku haray.
Puntland oo taliye cusub oo magacawday aaga Galgala ee Alshabaab ka dagaallamaan
AMISOM and Somali National Army capture Qoryooley